Profil amin'ny orinasa - Dongfang Whole-set Equipment Manufacturing Group Co., Ltd.
Jiangsu Dongfang feno ny fanamboarana fitaovana Manufacturing Group Co, Ltd.
Niorina tamin'ny 2000 ary manana renivohitra 118 tapitrisa yuan, Jiangsu Dongfang Whole-set Equipment Manufacturing Co., Ltd dia hita ao amin'ny Jingjiang, tanàna iray ao amin'ny faritra fampandrosoana ara-toekarena any Yangtze, izay tarihan'ny faritra fampandrosoana ara-toekarena Shanghai. Manana mpiasa 548 izahay, ary izahay dia manokana amin'ny fanamboarana sy fametrahana ny lafaoro sy kojakojan'ny lafaoro ho an'ny indostrian'ny solika. Ny vokatra vokarinay dia misy ny lafaoro fiovam-po famokarana hidrogen, lafaoro fanerena, lafaoro fanavaozana, lafaoro rivotra iainana, mpanamboatra fako, kojakoja fanodinana solifara, fantsona fiovam-po, preheatram-bataly, preheatrana vita amin'ny vy, famonosana lafaoro, onja marevaka, sns.
Manaraka ny foto-kevitra momba ny fanavaozana isika. Namorona ekipa talenta iray izahay, ary nampiasa ireo manampahaizana manokana momba ny varotra solika sy metallurgical malaza. Amin'izao fotoana izao, mpiasan'ny teknolojia teknika matihanina miisa 98 isika, anisan'izany ny injeniera zokiolona 2 mankafy ny fahazoan-dàlana manokana an'ny filankevi-panjakana, teknisianina 1 manana lohateny ara-teknika zokiolona, ​​18 miaraka amin'ny anaram-boninahitra antonony ary 25 miaraka amin'ny anaram-boninahitra zandriny. Manome lanja lehibe izahay amin'ny fiaraha-miasa amin'ny oniversite. Nitazona fiaraha-miasa ara-teknika be dia be izahay tamin'ny oniversite sy oniversite (Nanjing Tech University, Jiangsu University, East China University of Science and Technology, sns). Ivontoerana teknolojia orinasa iray dia natsangana ihany koa, ka nahazoany tombony 20 mahery, vokatra avo lenta 3 sy hajain'ny orinasa teknolojia avo lenta.
Nanamboatra ny rafi-pitantanana izahay ary nanorina rafitra tsara. Nandalo IS09001-2015 (fanamarinana ny kalitao kalitao), IS014001-2015 (fanamarinana ny rafitra tontolo iainana) ary OHSAS18001-2007 (fanamarinana ny rafitra momba ny fahasalamana sy fiarovana amin'ny asa) ary ny fanamarinana rafitra fanamafisana fiarovana. Ankoatr'izay, nomena ny fahazoan-dàlana fananganana fiakaram-pahefana A1 sy A2 isika, boiler hafanana fako ary boiler grade-B, bozom-pianarana ho an'ny fitaovana manokana ary fanamarinana fanodinana fanodinana ASME.
Nandritra ireo taona maro izay dia eken'ny besinimaro izahay fa nahazo mari-pankasitrahana iraisana sy nasionaly maro, toy ny Unit Quality Management Award any amin'ny faritany Jiangsu, AAA Credit Enterprise, sns. Mpamatsy ho an'ny marika any Shina sy eran'izao tontolo izao isika ary orinasa, anisan'izany ny Petro China, Sinopec, CNOOC ary koa ny SEI, HQCEC, East Engineering Engineering Company an'ny CNPC, SSEC China Chengda Engineering Company, West China Chemical Industry Design Institute, sns. Ho fanampin'izany, mpikamban'ny komity nasionaly isika ivon'ny teknolojia famolavolana fitaovana simika ary iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny filankevitra amin'ny alikaonan'ny famokarana hidrogen hidrogen.
Mifanaraka amin'ny foto-kevitra momba ny kalitao aloha sy amin'ny trosa indrindra isika. Izahay dia mandray ny fanavaozana ara-teknolojia ho toy ny orientation, mikendry ny hanomezana ny mpanjifa vokatra avo lenta sy serivisy fandraisana andraikitra. Miaraka amin'ny ezaky ny olona sy ny ezaka ataon 'ny firenentsika dia manolo-tena isika hitombo ho tonga mpamatsy fitaovana ilaina amin'ny indostrian'ny solika.
Mijery anay am-panaovana hetsika!
Ironisaly , Heureur Transit , Machine Chill , Railway , fampihenana Block , fizarana fanafana .